Function တစ်ခုကို စတင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Function ကိုစတင်ရေးရပါတယ်၊ ပြီးရင် သင်တည်ဆောက်မယ့် function ကို သင်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးရပါတယ်၊ အောက်မှ နာမည် kalay လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ fucntion ကိုစရေးပြပါမယ်။
Function kalay ( )
အထက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်လိုက်ပါ၊ အဖြေက ဘာမှမထွက်လာဘူးဖြစ်နေမယ်၊ တကယ်တော့ အထက်က ကုတ်မှာ bookie ဆိုတဲ့ function ကိုတည်ဆောက်ထားတယ်၊ သူ့ရဲ့အလုပ်ကို လဲ I am function လို့ရေးဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်၊ ဒါဆိုဘာလို့အလုပ်မဖြစ်တာလဲ၊ အကြောင်းကတော့ function ကိုမခေါ်သေးလို့ပါ၊ သူက ခေါ်မှ အလုပ်လုပ်တာလေ၊ အခု function ကိုခေါ်ကြမယ်၊ function ကိုခေါ်ဖို့အတွက် function ရဲ့နာမည်ကို နောက်က ဂွင်းစ ဂွင်းပိတ်ထည့် ပြီးရင်simicolon ထည့်ပြီးရေးလိုက်ရုံပဲ၊ အောက်မှာကြည့်ပါ၊
အထက်က ကုတ်မှာတော့ function ကိုခေါ်လိုက်ပါပီ၊ ဒီ့အတွက် function က သူ့ကိုခေါ်ခံရရင် လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ I am function ဆိုတဲ့စာသားကို browser ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုထုတ်ပေးပါပီ၊ function ကိုခေါ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်က function ရဲ့နာမည်ကို ရေးချလိုက်တာပါပဲ၊ ကျန်တ်ာတော့ အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး၊
အထက်က ကုတ်ကိုရေးပြီးရင် Run ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရင်ဖြင့် hey how are you ဆိုတဲ့ Alert box လေးကျလာမယ်၊ ဒါကတော့ alert box ရေးနည်းပါ၊ alert( ); လို့ရေးပြီး ဂွင်းစ ဂွင်း ပိတ်ထဲမှာထည့်ချင်တဲ့ စာသား massage ကိုထည့်ရေးလိုက်ပါ၊ ဒါဆိုရင်ဖြင့် သင်ရေးလိုက်တဲ့စာသားပါတဲ့ Alert box လေးကျလာမှာပါ၊
အခု alert box ရေးနည်းကို သိသွားရင်တော့ အထက်မှာသုံးခဲ့တဲ့ function ကို သုံးပြီး alert box ကိုခေါ်ကြည့်ပါမယ်၊ အောက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်ပါ၊
အထက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်လိုက်ပါ၊ ဘာမှအဖြေရမှာမဟုတ်သေးဘူး၊ ရေးထားတဲ့ function ရဲ့နာမည်က fonky ပါ၊ သူ့ရဲ့ အလုပ်ကတော့ alert box သုံးပြီး That look goofy, man! ဆိုတဲ့စာသားကို အဖြေထုတ်ပေးမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် အထက်က ကုတ် ကို Run ကြည့်လိုက်ရင် အဖြေရအုံးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး၊ အကြောင်းကတော့ function ကို မခေါ်ရသေးလို့ပါ၊ အောက် မှာ function ကိုခေါ်ထားတဲ့ကုတ်ကိုပါ Run ကြည့်လိုက်ပါ၊
အထက်က ကုတ်ကို Run ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အဖြေကို That look goofy , man! ဆိုတဲ့စာသားကိုထုတ်ပေးမှာပါ၊ အထက်က alert box ထဲရေးထားတဲ့ စာသားက function ဖြစ်တဲ့ fonky ရဲ့အလုပ်ပါ၊ အောက်မှာ fonky( ); လို့ရေးပြီး function ကိုခေါ်ထားတယ်၊ ဒီတော့ အခေါ်ခံရတဲ့ function က အလုပ်စလုပ်တယ်၊ သူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ Alert box ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်၊